सूर्य गोचर २०२२: मीन राशिमा सूर्य गोचर, यी ५ राशिले मात्र फाइदा हेर्नुहोस् ! - nepal day
सूर्य गोचर २०२२: मीन राशिमा सूर्य गोचर, यी ५ राशिले मात्र फाइदा हेर्नुहोस् !
प्रकासन मिति : ३० फाल्गुन २०७८, सोमबार ११:०९
सूर्य गोचर २०२२: सूर्यलाई सबै नौ ग्रहको राजा भनिन्छ। यसलाई आत्माको कारक पनि मानिन्छ। अग्नि ग्रह सूर्य मीन राशिमा जल तत्वमा प्रवेश गर्न लागेको छ । आगो र पानीको यो संयोजन मार्च 15 मा 12.31 बजे हुनेछ। यसपछि, सूर्य आफ्नो उच्च राशि मेष राशिमा 14 अप्रिल, 2022 को बिहान 8:56 मा गोचर गर्नेछ। सूर्यको गोचरले जीवनमा सधैं धेरै सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यस गोचरले सबै राशिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा जानौं ।
मेष- मेष राशिका व्यक्तिहरूको लागि यो गोचर धेरै राम्रो रहनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ भने प्रतियोगी परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीका लागि पनि यो समय राम्रो साबित हुने देखिन्छ । तपाईं लक्ष्यको बारेमा थप महत्वाकांक्षी पनि हुन सक्नुहुन्छ। रोजगारीका लागि पनि यो समय अनुकूल सावित हुन सक्छ। धेरै राम्रा कामको अवसर मिल्ने सम्भावना छ । यो ट्रान्जिटको समयमा कुनै पनि ठूलो लगानीबाट बच्न सल्लाह दिइन्छ।तपाईंको खर्च पनि बढ्न सक्छ, त्यसैले बजेट ठीकसँग सुनिश्चित गर्नुहोस्।
वृष– आर्थिक दृष्टिले यो समय वृष राशिका लागि लाभदायी रहनेछ । यस समयमा तपाईं एक भन्दा बढी स्रोतबाट पैसा कमाउन सफल हुन सक्नुहुन्छ। यस अवधिमा कतैबाट अचानक लाभ मिल्ने सम्भावना छ। रोकिएका आयोजनाबाट लाभ मिल्नेछ । तपाईं आफ्नो शौक र रुचि काम एक पेशा मा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पत्तीमा लगानी गर्नको लागि अहिले राम्रो समय हो। शिक्षाको दृष्टिकोणले यो अवधि वृष राशिका विद्यार्थीहरूका लागि अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ।
मिथुन- यस समयमा तपाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कडा परिश्रम र प्रयासबाट अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्न सफल हुनुहुनेछ। साथै, यस अवधिमा, तपाईंले आफ्नो काममा राम्रो पकड राख्ने सम्भावना छ र यस अवधिमा तपाईंको कामको सबैले प्रशंसा गर्न सक्छन्। यस अवधिमा सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहने सम्भावना छ। जागिरको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने केही राम्रा अवसरहरू प्राप्त हुने सम्भावना छ । सरकारी जागिरमा लागेकाहरूका लागि यो समय शुभ साबित हुन सक्छ।
कर्कट- सूर्यको गोचरले तपाईका लागि सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ। यसले तपाईको आर्थिक अवस्था र तपाईको भाग्यलाई बलियो बनाउन सक्छ। यस समयमा, नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने तपाईंको क्षमता बढ्नेछ। यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को विस्तार र वृद्धि गर्न को लागी केहि नीतिहरु लाई लागू गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ, तब यो तपाइँको लागि अनुकूल समय हो। यो अवधिमा लामो परियोजनामा ​​लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यस समयमा केही उच्च अधिकारीको सहयोग पनि प्राप्त हुन सक्छ।
सिंह- तलब पाउने व्यक्तिहरूले कार्यस्थलमा आफ्नो कामको सन्दर्भमा केही समस्या र अवरोधहरूको सामना गर्नु पर्नेछ। तपाईंले यस ट्रान्जिट अवधिमा आफ्नो कामको बारेमा असुरक्षित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यो समय तपाईंको लागि काम परिवर्तन गर्न राम्रो छैन। सेयर बजार वा सेयर बजारसँग आवद्ध भएकाहरूका लागि पनि यो अवधि खासै अनुकूल नहुन सक्छ । तपाईलाई कुनै पनि प्रकारको सम्झौता वा लगानी गर्दा सावधान रहन सल्लाह दिइन्छ, अन्यथा तपाईलाई ठूलो नोक्सान हुने सम्भावना छ।स्वास्थ्यको हिसाबले यस समयमा तपाई भित्रबाट कमजोरी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
कन्या– कामको सिलसिलामा केही यात्राको योजना बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईको लागि खासै फलदायी साबित हुनेछैन। कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो काममा बढी व्यस्तता महसुस गर्नेछन्। तपाईमा कामको बोझ बढ्नेछ। साझेदारीमा व्यापार गर्नेहरूलाई अलि सावधान रहन सल्लाह दिइन्छ। यस अवधिमा, कामदार व्यक्तिहरूको आफ्नो मालिक वा उच्च अधिकारीहरूसँग केही विवाद हुन सक्छ, जसले कार्यस्थलमा तपाईंको छविलाई असर गर्नेछ। व्यक्तिगत रूपमा, तपाईं यस अवधिमा स्वभावले चिडचिडा हुन सक्नुहुन्छ।
तुला- व्यावसायिक रूपमा हेर्दा यो अवधि रोजगारीका लागि अनुकूल साबित हुन सक्छ। यस समयमा, तपाइँ तपाइँको काममा बलियो पकड र कमाण्ड हुन सक्छ, जसको कारण तपाइँको काम को तपाइँको सहकर्मीहरु द्वारा सराहना गर्न सकिन्छ। कार्यस्थलमा फरक पहिचान बनाउन सफल हुनुहुनेछ। जागिर खोज्नेहरुका लागि यो समय राम्रो रहेको छ । यस अवधिमा तपाईले धेरै राम्रो कामको अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो समय तुला राशिका विद्यार्थीहरूका लागि अनुकूल साबित हुन सक्छ।आर्थिक रुपमा यो अवधि तपाईको लागि राम्रो रहने सम्भावना छ ।
वृश्चिक- जागिर खोज्नेहरूका लागि यो समय अनुकूल साबित हुन सक्छ। यस अवधिमा केही राम्रो कामको अवसर प्राप्त हुने सम्भावना छ। साथै, यस अवधिमा तपाइँ तपाइँको क्षेत्रमा तपाइँको काम को लागी अधिक महत्वाकांक्षी हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कडा मेहनत गरेको देख्नुहुनेछ, जुन तपाईंको लागि फलदायी साबित हुनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि पनि यो अवधि फलदायी साबित हुन सक्छ।ब्यक्तिगत जीवनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो समय मायालु जोडीका लागि अनुकुल नहुने देखिन्छ ।
धनु- विशेषगरी पारिवारिक व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि यो समय फलदायी साबित हुनेछ। यस अवधिमा, तपाईं आफ्नो व्यवसायको विस्तारको लागि केही नीतिहरू बनाउन र तिनीहरूलाई सही रूपमा लागू गर्न सफल हुन सक्नुहुन्छ। घरजग्गा कारोबार गर्नेहरूका लागि पनि यो समय अनुकूल छ। रोजगारी गर्नेहरूका लागि यो अवधि औसत फलदायी साबित हुन सक्छ। यस समयमा तपाई आफ्नो कार्यस्थलमा कामको बोझको कारण धेरै व्यस्त हुन सक्नुहुन्छ।शिक्षाको दृष्टिकोणले यो समय धनु राशिका विद्यार्थीहरूका लागि अनुकूल साबित हुन सक्छ।
मकर राशि- मकर राशिका लागि सूर्य खासै अनुकूल ग्रह होइन। कामको सन्दर्भमा धेरै यात्राहरूले कुनै सकारात्मक परिणाम दिने छैनन्। जागिर खानेहरूका लागि पनि यो समय अनुकुल नहुने सम्भावना छ । यस समयमा तपाइँ तपाइँको इच्छा विरुद्ध स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईंको कार्य प्रोफाइलमा परिवर्तनको सम्भावना छ। बलियो इच्छाशक्तिको साथ, व्यक्तिले ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्न सफल हुन सक्छ।तपाईलाई यो ट्रान्जिट अवधिमा तपाईको व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा कसैसँग कुरा गर्दा तपाईको बोली नियन्त्रण गर्न सल्लाह दिइन्छ किनकि तपाई स्वभावले क्रोधित र दृढ रहन सक्नुहुन्छ।
कुम्भ- वेतनभोगी व्यक्तिहरूको कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीहरूसँग केही मतभेद हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, साझेदारीमा व्यापार गर्नेहरूले पनि यो अवधिमा आफ्नो पार्टनरसँग मतभेदका कारण व्यापारमा केही उतारचढावको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। पारिवारिक व्यावसायसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूका लागि पनि यो समय अनुकूल नहुन सक्छ। तपाईंले यस पारगमनको समयमा आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनावको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर तपाईंको व्यवसायमा पर्ने सम्भावना छ।यदि तपाईले ठूलो लगानी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ भने यो समय तपाईको लागि शुभ साबित हुन सक्छ।
मीन- मीन राशिका व्यक्तिहरूले यस पारगमनमा मिश्रित परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन्। पेशागत जीवनको दृष्टिकोणले हेर्दा यो अवधि रोजगारदाताहरू विशेष गरी सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि अनुकूल साबित हुन सक्छ। यस अवधिमा तपाईंले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने धेरै नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्ने सम्भावना छ, तर यस समयमा तपाईंले आफ्नो कार्य समय सीमा भित्र पूरा गर्न अल्छी देखाउन सक्नुहुन्छ।स्वास्थ्यको हिसाबले यो अवधिमा ज्वरो र रक्तचाप जस्ता स्वास्थ्य समस्याले सताउन सक्छ।